Ambatoharanana Distrikan’i Fenerive-Est ny 05 Mey nifoha 06 Mey lasa teo.Mpandraharaha ara-toekarena iray raha tsiahivina no notafihana jiolahy miisa 05. Ireto farany izay nitondra basy poleta iray sy basy vita gasy iray. Lasan’izy ireo tamin'izany ny vola mitentina 99 000 000 Ar. Nentin’ireo jiolahy tamin'izany ihany koa ny zazavavy kely 8 taona zanak'ilay mpandraharaha saingy navotsotr'ireo jiolahy rehefa tafatsoaka izy ireo. Vokatry ny firaisan-kinan’ny fokonolona, dia voasambotra ny alin’io 05 mey io ihany ny iray tamin'ireo jiolahy ireo. Ity farany izay voalaza fa atidoha niketrika izao asa ratsy izao, araka ny fanadihadihana, dia fantatra fa rahalahy am-panambadian’ilay olona voatafika ary samy mponina Ambodihazinina ihany ry zareo. Ny fikaroham-baobao hatrany no nahalalana fa nafarana manokana avy tany Toamasina ireo olona miisa 04 nanao ny fanafihana ireo. Voasambotra ny 13 mey teo izy ireo rehefa nokarohin'ny polisy andro vitsivitsy izay. Mbola misy olona hafa ihany koa mbola karohina izay isan'ny nandray anjara tamin'ny fanafihana ary nitazona ny lela-vola izay nangalarin'izy ireo miampy ny basy iray nentina nanao ny fanafihana. Miisa 05 ireo olona mbola tadiavina. Natolotra ny fitsarana omaly alakamisy moa izy ireo ary nampidirina am-ponja vonjimaika.